अ*धुरै र*ह्यो बुद्ध तामाङ्गको स*पना, प्रा*ण त्या*ग्नु अघि बोलेको व*चनले सबैलाई रु*वायो ! (भिडियो) – ताजा समाचार
अ*धुरै र*ह्यो बुद्ध तामाङ्गको स*पना, प्रा*ण त्या*ग्नु अघि बोलेको व*चनले सबैलाई रु*वायो ! (भिडियो)
काठमाडौ। जीवन कुन बेला कस्तो परिस्थितीमा गुज्रन्छ थाहा नै हुन्न । अहिले हासिरहेको जीवन कुन बेला ओ*ईलिन्छ पत्तै हुन्न । बुद्ध तामाङ्गलाई बिराटनगरको नोबेल अस्पतालको ला*परबाहीले अ*परेशन पछि उनको शरीर सु*केर ४५ केजी बाट १४ केजीमा झ*रेको थियो । बुद्धलाई अहिले उनका फुपूले टिचिङ्ग अस्पतालमा उपचार गर्दै आइरहेकी थिईन् । घरायसी अव*स्था समेत नजिक रहेको बुद्धको बुवा पनि बि*रामी छन् भने आमाले ३ वर्षको हुदै छा*डेर अर्कैसंग गएकी थिइन् ।त्यसपछि उनि फुपुको साथमा बस्दै आएका थिए ।
निकै नै ना*जुक अ*वस्था भएका बुद्धको क्र*मिक रूपमा सु*धार भइरहेको थियो । क*म्जोर अ*वस्थामा पुगिसकेका बुद्ध स्व*स्थयमा केहि सु*धार आएपछि आफ्ना सामान्य कामहरु आफैँ गर्न थालेका थिए । स्वा*स्थ्यमा सु*धार भएपछि पढेर भ*विस्यमा डाक्टर बन्ने उनको सपना रहेको थियो ।उनको यस्तो अ*वस्था भएपछि उनलाई देश तथा विदेशबाट मनकारी मनहरुले उनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरिरहेका थिए ।उनको स्वा*स्थ्यमा सुधार भईरहेको थियो। तर केहि दिनमै उनको अ*चानक नि*धन भएको छ।
उनकी फुपूले लाखौं को*शिस गर्दा पनि उनलाई ब*चाउन सकिनन्। आफ्नो एकमात्र साहारा बुद्धको मृ*त्यु भएपछि उनकी फुपू निकै दु*खि भएकी छिन्। आफू ठिक भएर उनको डाक्टर बन्ने स*पना पनि स*पना मै सि*मित भयो बुद्धको। यसै दु*खद घ*डीमा उनकी फुपूसंग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेरौँ।